Abahlali abahlala eCanada bazisa utywala eCanada
Imimiselo yeeNkokheli zabemi baseCanada abazisa utywala eCanada
Kukho imigaqo nemimiselo ekhethekileyo malunga nokuzisa utywala ngaphandle kokuya eCanada evela kwelinye ilizwe. Akukuphela nje kufuneka uqaphele uhlobo kunye nobungakanani botywala, kodwa kufuneka kwakhona ukwazi ukuba xa kuthengwa utywala ngexesha lokuhamba.
Ukuxolelwa ngabanye ngokusekelwe kwixesha elide oye waphuma ngaphandle kwezwe
Ukuba uye wahamba ngeeyure ezingaphantsi kwama-24 akukho ukukhululwa komntu.
Ukuba uye wahamba iiyure ezingama-24 okanye ngaphezulu ungabanga iimpahla ukuya ku-CAN $ 200 ngaphandle kokuhlawula umrhumo kunye nentlawulo. Ngelishwa, iziyobisi ezinxilisayo azifakiwe kule mali.
Ukuba uhambe ngeeyure ezingama-48 okanye ngaphezulu, unokubanga iimpahla ukuya ku-CAN $ 800 ngaphandle kokuhlawula umrhumo kunye nentlawulo. Ezinye iziyobisi ezinxilisayo zifakwe kulo mxolelo. Kufuneka ube nempahla nawe xa ufaka iCanada.
Ukubuyela kwi-Resitency Free Resistance Authority yaseThanada
Ukuba ungumhlali waseCanada okanye umhlali waseCanada obuya e-Canada ngaphandle kweCanada, okanye owayengumhlali waseKhanada ukuba ahlale eCanada, uvumelekile ukuba ulethe ubuncinci besiselo (iwayini, utywala, ubhiya okanye iphosta) kwilizwe ngaphandle kokuhlawula umrhumo okanye irhafu, njengoko nje:
utywala uhamba nawe
udibana nobuncinane bokuphuza ngokomthetho kwiphondo okanye kwintsimi ongena kuyo eKhanada
Ube ngaphandle kweChanada ngeeyure ezingama-48.
Ungangenisa enye yezi zinto zilandelayo:
1.5 ilitha (50.7 i-ounces e-US) yewayini, kuquka i-coolerers yewayini ngaphezu kwe-0.5 ekhulwini kotywala, okanye
1.14 ilitha (38.5 i-ounces zase-US) zotywala, okanye
i-1.14 ilitha (38.5 i-ounces e-US) yewayini kunye notywala, okanye
24 x 355 milliliter (12 ounce) iikhenki okanye iibhotile zebhiya okanye i-ale, kubandakanya ubhiya obupholile ngaphezu kwe-0.5 ekhulwini kotywala (ubuninzi beelitha eziyi-8.5 okanye i-287.4 ii-ounces zase-US).
Ukuzisa okungaphezulu kwesibonelelo sokunxiliswa kotywala eCanada
Ngaphandle kwiiNdawo eziMntla-ntshona-ntshona kunye neNunavut, abahlali beCanada ababuyayo bangenise ngaphezu kwezibonelelo zabo zotywala ezibhalwe apha ngasentla nje kuphela xa uhlawula amasiko kunye nokuhlola kwiphondo / kwintsimi. Imali ovumelekileyo ukuba uyizise eCanada nayo iphantsi kwiphondo okanye kwintsimi apho ungena khona eCanada. Ukufumana iinkcukacha malunga nemali ethile kunye neerhafu, qhagamshelana negunya lokulawula utywala kwiphondo okanye intsimi efanelekileyo phambi kokuba ufike eCanada.
Ukuthumela Utywala Xa Ubuyela eKhanada
Ukuba ungumhlali waseKhanada obuyela eKhanada kwaye ufuna ukuthumela iCanada e-alcohol (okubhalwe kwipetroli yakho yewayini), qha ga mshelana negunya lokulawula utywala kwiphondo elifanelekileyo okanye kwintsimi ekuhlawuleleni iimali zephondo okanye zemimandla kunye novavanyo ngaphambili. Ukuze ukuthunyelwa kwakho kukhutshwe xa usufika eKhanada, kuya kufuneka ubonise irhafu kwiimali zephondo okanye kwintsimi kunye novavanyo kwaye kuya kufuneka uhlawule ukuhlolwa kwamasiko omasipala.
Ukuba unemibuzo okanye ufuna ulwazi oluninzi malunga nokuzisa utywala eCanada, nceda uqhagamshelane ne-Canada Borders Services Agencies.
Ukuhlawulwa kweentlawulo ezivela kwiiRhafu zaseKhanada okanye iziTyala
Izixokelelo zeeTahana zaseKhanada zokubuyela kwiiNgingqi zaseKhanada
Indlela yokuxelela ixesha kwiJamani
Ukuphepha ukuxhomekeka ngokukhawuleza
Amaxhoba amaSilamsi kwi-Attack ye-Terrorist 9/11
I-FERGUSON - Igama elithethayo kunye negama lomthombo
Ukubandakanya kweMerika kwiiMfa ezivela kwiColonial Times ukuya kwiNje
I-Zoology: INzululwazi kunye noPhando lwezilwanyana
6 Imithandazo yoKhuselo yokufundisa abantwana
Iingoma ezigqwesileyo zeCarlos Vives
Indlela yokususa i-Skateboard Bearings